गोलाकार अर्थतन्त्र र वातावरणका लागि यसको महत्त्व | बेजिया
मारिया vazquez | | समाचार
हालको आर्थिक मोडेलको तुलनामा, एक रेखीय र आक्रामक मोडेल "टेक-डू-डिस्कर्ड" मा आधारित, सर्कुलर अर्थतन्त्रले आमन्त्रित गर्ने मोडेल प्रदान गर्दछ। उत्पादनहरूको जीवन चक्र विस्तार गर्नुहोस्यसरी फोहोरको उत्पादन घटाएर वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउँछ।
कच्चा पदार्थमा बलियो निर्भरता, आपूर्तिका सामग्री र ऊर्जा स्रोत दुवैको ह्रास र जलवायु परिवर्तन विरुद्धको लडाइमा प्रत्यक्ष प्रभावले वर्तमान मोडेललाई दिगो बनाइदिन्छ। त्यसकारण धेरै देशहरू पहिले नै यात्रा गरिरहेका छन् परिक्रमा तर्फ, नयाँ आर्थिक रणनीति अपनाउने । तर गोलाकार अर्थतन्त्र भनेको के हो र यसको फाइदाहरू के हुन्? हामी आज यो सबै बारे कुरा गर्छौं।
1 गोलाकार अर्थतन्त्र भनेको के हो ?
गोलाकार अर्थतन्त्र भनेको के हो ?
गोलाकार अर्थतन्त्र उत्पादन र उपभोगको मोडेल हो जसमा विद्यमान सामग्री र उत्पादनहरूलाई सकेसम्म धेरै पटक थप मूल्य सिर्जना गर्न साझेदारी, पुन: प्रयोग, मर्मत, नवीकरण र पुन: प्रयोग समावेश हुन्छ। यसरी, उत्पादनहरूको जीवन चक्र विस्तार गरिएको छ।
यो एक हो जसमा उत्पादन, सामग्री र स्रोतहरूको मूल्य सकेसम्म लामो समयसम्म अर्थतन्त्रमा राखिन्छ। र कुन मोडमा फोहोर उत्पादन न्यूनीकरण गरिएको छ, यसैले दिगो अर्थतन्त्र हासिल गर्न योगदान पुर्‍याउँछ, स्रोतको प्रयोगमा कुशल र प्रतिस्पर्धी।
डिजाइनद्वारा संचालित र नवीकरणीय ऊर्जा र सामग्रीको प्रयोगद्वारा समर्थित, गोलाकार अर्थतन्त्रले फोहोरको उत्पादनलाई सकेसम्म कम गर्ने र उत्पादनबाट बच्न नसकिने फोहोरको अधिकतम उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसरी, मूल्य साझेदारी, मर्मत, पुन: प्रयोग र पुन: प्रयोग मार्फत सिर्जना गरिन्छ। र त्यसपछि सामग्रीहरू सुरक्षित रूपमा प्रकृतिमा फर्काइन्छ, पोषक तत्वहरू माटो र प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रहरूमा फर्काउँछ।
यो मोडेलले आज हामीले डिजाइन गर्ने, उत्पादन गर्ने र उपभोग गर्ने तरिकामा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्छ। चीन र युरोप तिनीहरू सर्कुलरिटीमा संक्रमणमा विश्व नेताहरू हुन्, जसबाट तिनीहरूले आर्थिक रूपमा लाभ उठाउन सक्छन्। र यो हो कि केहि अध्ययनहरूले सुझाव दिए अनुसार, यो संक्रमणले 1,8 मा युरोपको लागि 2030 ट्रिलियन यूरोको शुद्ध आर्थिक लाभ उत्पन्न गर्न सक्छ। सधैं, पक्कै पनि, वर्तमान परिदृश्यको तुलनामा।
मोडेलमा यो परिवर्तनबाट के फाइदाहरू छन्? हामी बुझ्दछौं कि फोहोरको उत्पादन घटाउनु र जसको पुस्ताबाट बच्न सकिएको छैन त्यसबाट अधिकतम फाइदा लिनु आफैमा ठूलो फाइदा हो। तर हामीले सोचेका छौं कि सायद हामी जस्तै तपाईलाई पनि गोलाकार अर्थतन्त्रको आर्थिक र वातावरणीय फाइदाहरूको थप ठोस उदाहरणहरू चाहिन्छ। त्यसोभए हामीले केहि प्रत्याशित वा संकलित गरेका छौं:
गोलाकार अर्थतन्त्रको प्रयोगले विरुद्धको लडाइमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ जलवायु परिवर्तन र फोहोर रोकथाम। हामीले स्टिल, सिमेन्ट, आल्मुनियम र प्लास्टिकको उत्पादन र प्रयोग गर्ने तरिका परिवर्तन गर्न सक्छौं ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जन कम गर्नुहोस् यी उद्योगहरूबाट २०५० सम्म ४०% सम्म।
आर्थिक रूपमा, भवन निर्माणको लागि पुन: प्रयोग गरिएको वा पुन: प्रयोग गरिएको स्टिलको प्रयोगले 25% सम्म उत्पादन गर्न सक्छ। भौतिक लागतमा बचत प्रति टन स्टील।
यसको पक्षको लागि, उत्पादनमा कमी र प्लास्टिकको खपत सन् २०४० सम्ममा विश्वको एक तिहाइ प्लास्टिक फोहोरबाट बच्न सकिन्छ ।
यसले उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउनेछ अधिक टिकाऊ उत्पादनहरू र जीवनको उच्च गुणस्तरको साथ। कल्पना गर्नुहोस् कि मोबाइल फोनहरू पहिले जस्तै छुट्याउन सजिलो थियो। यसलाई पुन: निर्माणको लागत आधामा कटौती गर्न सकिन्छ। वा त्यो उपकरणहरू मर्मत गर्न सकिन्छ, कानूनद्वारा वर्षौंसम्म भागहरूको आपूर्तिको ग्यारेन्टी गर्दै।
यसले कच्चा पदार्थमा भारी निर्भरता कम गर्नेछआपूर्तिको सुरक्षामा सुधार गर्दै जुन महामारीसँग हामीले देखेका छौं र जोखिममा परेको देखिरहेका छौं।
के यी उदाहरणहरू तपाईंलाई उपयोगी छन्? हामी आशा गर्छौं कि तिनीहरूले तपाईंलाई गोलाकार अर्थतन्त्रको दायरा राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गरेको छ। दिगो उपभोग र वातावरण संरक्षणको ग्यारेन्टी गर्न अपनाउनु पर्ने मोडेल।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » समाचार » परिपत्र अर्थव्यवस्था र वातावरण को लागी यसको महत्व
के तपाई चिन्ता नियन्त्रण गर्न चाहनुहुन्छ? पेट सास फेर्न मद्दत गर्छ